Sirivheri Nanoparticles, Mhangura Nanoparticle, Multi Yakakomberedzwa Carbon Nanotubes - Hongwu
Yakakosha Simbi Nanoparticles
Yakakosha Simbi Colloidal
Nano Diamond Upfu
Yakawanda Yakakomberedzwa Carbon Nanotubes
Imwe Yakakomberedzwa Carbon Nanotubes
Kaviri Yakakomberedzwa Carbon Nanotubes
Yakasarudzika Multi Yakakomberedzwa Carbon Nanotubes
Sirivha yakaputirwa poda yemhangura
Mhangura Oxide Nanoparticles
Titanium yakasviba Nanoparticles
Nesilicon Dioxide Nanoparticles
Nickle Oxide Nanoparticles
Magnetic Iron Iron oxide Nanoparticles
YSZ Yttria Yakagadzika Zirconia
CeO2 Cerium oxide Nanoparticles
Barium Titanate nanoparticles (BaTiO3)
Boron Nitride Upfu (BN)
Titanium Nitride Powder (TiN)
Aluminium Nitride Upfu (AlN)
Boron Carbide Upfu (B4C)
Nesilicon Carbide Upfu (β-SiC-p)
Titanium Carbide Upfu (TiC)
Titanium Diboride Powder (TiB2)
Zirconium Diboride Powder
Mhangura Nanowires (CuNWs)
tave tichidada kugadzira, kurongedza uye kutengesa mhinduro yedu pachedu kwemakore mazhinji.
Hongwu muridzi wemasimba mana ekutsvagisa chigadzirwa uye ekuvandudza marabhoritari, nzvimbo yekuyedza, nzvimbo yekutsvagisa marabhoritari uye paseji yekuyedza, ichinyanya kushambadzira nzvimbo dzakasiyana siyana dzeanoparticles uye zvigadzirwa zvekuvandudza zvezana ramakore rechi21 kubvira 2002. Isu tanga tichitsvaga misika , develoing innovation matekinoroji, uye nekupa mabudiro ekugadzirisa tichishandisa yedu nanomaterials hunyanzvi, yakazvipira kugadzirisa kuperevedza kwezvinyakare zvigadzirwa.
ongorora yedu main MABUDI
Iwe unogona kusarudza kure-pasherufu nanomaterials kana kuve nayo yakagadzirirwa kuti ienderane nezvaunoda.
MITAMBO INOKOSHA INOKOSHA
Kuhwina kubudikidza hunoshamisa
matarenda uye zvigadzirwa zvemberi
Hongwu's mission: sehunyanzvi hwekutengesa mumunda wenano nyowani zvinhu zvine basa rakabatana
Hongwu kukosha: mhando uye vatengi kutanga, kutendeseka uye kuvimbika, yekutanga-kirasi sevhisi.
Manejimendi manejimendi manejimendi: modular manejimendi, namatira kumusika-yakatarisana, kusangana zvine musoro zvinodiwa nevatengi sebasa. Tarisa pane iro basa nekudzika kurima uye nekuchenjerera kurima.
Kuomerera kumusika-wakanangana, unogutsa vatengi 'zvinonzwisisika zvinoda se Hongwu muridzi mutoro, uchitarisana neindasitiri, kurima zvakanyanya, kuve mutengesi ane hunyanzvi uye mupi webasa anoenderana mumunda wezvinhu zvitsva, kuwedzera mukupa zvigadzirwa zvakajairika, inogona zvakare kugadziridzwa zvinoenderana nemutengi akananga zvinodiwa. Ticharamba tichivandudza mhando yechigadzirwa uye nhanho dzebasa, zvirinani kushandira vatengi vedu kubva kumba nekune dzimwe nyika, acheive kuhwina-kuhwina kubudirira.
Hongwu ane yemhando kugadzirwa michina, yepamusoro muitiro matanho uye akakwana kugadzirwa kudzora system. Mukugadzirwa kwekugadzira, huwandu hwese hwekambani hwekuita mhando yekutanga hunoitwa. Kuona kuti zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakatsiga.
R & D module
Hongwu ine nyanzvi R & D timu inoumbwa neruzivo nanotechnology vaongorori uye main mainjiniya, vadzidzi vezvechiremba, uye mapurofesa mukugadzira zvigadzirwa zvitsva. Tiine Hongwu Research Institute nemayunivhesiti sekutsigirwa kwehunyanzvi, isu tinonyatsoteedzera kudiwa kwemusika uye kuramba tichikudziridza nekugadzira zvigadzirwa zvitsva.
Zvekushanda zvakanaka kwekambani seyese, isu tine timu yehunyanzvi uye yakarovedzwa chengetedzo, inosanganisira zviwanikwa, manejimendi, mari, kutenga, zvigadzirwa, zvemutemo, zvemari nezvimwe zvinhu zvekuchengetedza zvakakwana, vese vashandi vekambani vanoshanda. pamwe chete, shandai nesimba, muhuwandu nerutsigiro rwevatengi vanobva kumba nekune dzimwe nyika, isu tiri kugara tichigadzira kubwinya kutsva.
Electromagnetic Wave Inopinza Zvinhu
chii chedu Vatengi vakati
Takaita dzinoverengeka dzekuyedza uye takawana zvinogutsa mhedzisiro. Nenguva isipi dhipatimendi redu rekutenga rinoronga mirairo mitsva. Ndokumbirawo mugadzirire 8-10kg yesirivheri yeupfu kwatiri uye muve nechokwadi chekuti yakafanana neyekupedzisira odha. Ndatenda
Yakasvika nekukurumidza chaizvo uye yakakura zvinhu zvekushandisa. Isu tiri parizvino kuyedza mumabatch edu uye kusvika parizvino iri kuita nemazvo ndinongotarisira kuti ichawedzera dziviriro kwenguva yakareba. Pane here zvimwe zvinwiwa kana hupfu zvauinazvo zvinogadzikana mumafuta / solvent / waxes zvinozobatsira iyo kudzora kwemvura yatinogona kushandisa padivi peiyo2 powder.
Iyo yapfuura ZnO nanopowder inokodzera kuita kwedu. Uye isu tichaenda kunotora imwe 800kg. Ndokumbira unditumire chinopihwa pane icho uye 2000kgs uye unoratidza inotungamira nguva Ndatenda.
Kune iyo 100-200nm Si, Yekupedzisira 3kg inoshanda zvakanaka kune kwedu kunyorera. Tinoda kumhanyisa 20kg yekuyedza odha mwedzi unouya, uye nhanho inotevera ichave 100kg. Ndokumbira utaridze mutengo wako wakanakisa, zvakare kutumira uye kutungamira nguva ye20kg uye 100kg, ndatenda.
Parizvino Pt nanopowder kuyedzwa kwakanaka, tinoda imwe 10g yekuwedzera kuyedza uye kuongorora ASAP. Ndokumbira utumire iyo Proforma Invoice.
Kubvunza kweS Solutions
Maindasitiri ekushandisa mashandiro, achijairira kuchinja zvinodiwa Kwemakumi maviri emakore apfuura, isu tinovaka mukurumbira wedu muindastiri kubva kune vatengi vedu neyakaenderana mhando uye yakanak mhinduro.
ichangoburwa nhau & mablog
ne adminJul-06- 2021
Inoitisa uye antistatic nanomaterials anoshandiswa mumachira uye kemikari fiber maindasitiri
Iko kuvandudza kweanotechnology uye nanomaterials inopa nzira nyowani uye mazano ekushandisa zvigadzirwa zveantistatic. Iko kuitisa, magetsi emagetsi, akanyanya kudhirowa uye Broadband zvivakwa zvezvinhu zveNano, zvakagadzira mamiriro matsva ekutsvaga nekuvandudza conduc ...
Iine cesium tungsten yendarira nanoparticles, iyo nguva yeangwara kupisa kuputira yasvika!
Girazi kupisa kupisa kuputira ndiko kupfeka kwakagadzirwa nekugadzirisa imwe kana akati wandei nano-upfu zvinhu. Izvo-nano-zvishandiso zvinoshandiswa zvine zvakasarudzika zvemagetsi zvinhu, ndiko kuti, zvine yakanyanya chipingaidzo mumatunhu e infrared uye ultraviolet, uye yakakwira transmittance munzvimbo inoonekwa yechiedza nharaunda. Us ...
Nanoparticles zvinhu uye Piezoelectric ceramics
Piezoelectric ceramics imhando yeruzivo inoshanda ceramic zvinhu zvinokwanisa kushandura michina simba uye simba remagetsi kune rimwe nerimwe. Iyo piezoelectric mhedzisiro. Pamusoro pe piezoelectricity, piezoelectric ceramics zvakare ine dielectricity, elasticity, nezvimwe, izvo zvakave zvakawandisa ...
Chikwata chedu Chinodarika Kuti Chikupe Iyo Inobudirira Nanomaterial Uye Yakanakisa Service. Taura nesu Nhasi! Services: Anokosha Metal Nanoparticles, Metal Nanoparticles, Metal oxide Nanoparticles, Nanotubes, Nanowires Uye Colloidal.
R307, Chuangkegu, No.43 Tangdong East Road, Tianhe Dunhu, Guangzhou
© Copyright - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.